कोरोनाको बढ्दो जो’खिमलाई चुनौती दिदै मल लिनेको भीड
पछिल्लो समय चितवनमा कोरोनाको सं’क्रमण र यसबाट मृ’त्यु हुनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । तर, पनि चितवनमा कोरोनाको बढ्दो जो’खिमलाई चुनौती दिदै मल लिने किसानहरुको ठूलो भीड लागेको छ । चितवनमा मलको अभाव भएपनि १० किलो मल लिन ४ दिनदेखि लाईनमा बसेका कृषकहरु खाली हात नै फर्किनु परेको छ ।
जिल्लामा कोरोना सं’क्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै करिब ३ हप्तादेखि निषेधाज्ञा जारी छ । सामाजिक दूरी कायम नगरी रासायनिक मलका लिनका लागिे सयौं कृषकको भीड लाग्ने गरेको छ ।
विहान ४ बजेदेखि मलका लागि उनीहरु भीडभाड गर्दै कृषि बहुउद्देश्यीय साझा संस्था कार्यालय अगाडि लाईनमा बस्दै आएका छन् । तर घण्टौ पर्खदा पनि पालो नआएको कृषकले गुनासो गरेका छन् ।
लाइनमा बस्नेहरुलाई कोरोना सं’क्रमणको डर भन्दा बाली उब्जनीको चिन्ता देखिएको थियो । सयौंको भीडलाई प्रहरीले दुरी कायम गरेर मिलाउने प्रयास गरेपनि असम्भव देखिएको थियो ।
चितवनमा रासायनिक मलको अभाव हुँदा कृषकहरु प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । वर्षभर खाने धान रोपेका कृषकहरुले धान गोडमेल गरी रासायनिक मल (यूरिया) सजह रुपमा नपाउँदा समस्यामा परेका हुन् ।
डा. युवराज खतिवडाको मन्त्री कार्यकाल सकिएपछि संविधानबमोजिम उहाँलाई पुनः सोही पदमा ल्याउन संविधान बाधक हुने भएको छ । संसद्को दुवै सदनको सदस्य नभएको व्यक्ति नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, त्यसरी मन्त्री भएको व्यक्तिले पदलाई निरन्तरता राख्न ६ महिनाभित्र कुनै सदनको सदस्य भइसक्नुपर्ने प्रावधान धारा ७८ (२) मा छ ।
मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा सो व्यक्ति हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानको धारा ७८ (३) मा भनिएको छ– ‘उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।’ संसद् सचिवालयका सहसचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले खतिवडा हाल कुनै पनि सदनको सदस्य नभएको जानकारी दिनुभयो ।
मूर्खदेखि दैव डराउँछ भनेजस्तो अवस्थामा पुगेँ : प्रचण्ड